काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या १६ हजार ६१६ पुग्यो
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । आज काठमाडौं उपत्यकामा थप ७६७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये काठमाडौं जिल्लामा ६०२ जना ,ललितपुरमा ६४ र भक्तपुरमा १०१ जना रहेका छन्
आज थप १३२५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ९६६ डिस्चार्ज
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । आज थप १३२५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यससँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या ६४ हजार १२२ पुगेको स्वासथ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले
नेकपा सचिवालयमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल, सोमबार पुन: बैठक बस्ने
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको छलफल भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आज बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत चार एजेण्डामा
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । पेरिसडाँडा पुगेर ठूला नेतालाई झापड हान्न आएकी हुँ भन्ने महिलालार्ई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा दोलखाकी बालिका खड्का रहेकी छन् । यसअघि ती
काठमाडौँ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट विदेशमा रहेका २४४ नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए० अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका अनुसार १७ मुलुकमा ती नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् ।
कोरानाबाट एक सैनिकको मृत्यु
काठमाडौँ । नेपाली सेनामा कार्यरत एक सैनिकको कोरानाबाट मृत्यु भएको छ । काठमाडौँमा सेवारत रामेछाप घर भएका ती ३४ वर्षीय सैनिकको गत भदौ २९ गते मृत्यु भएको सैनिक जनसम्पर्क तथा
चितवन । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका एक कर्मचारी नहरमा मृतावस्थामा भेटिएका छन् । मृत्यु हुनेमा सिमरा घर भई विगत ११ वर्षदेखि अस्पतालमा काम गर्दै आएका ३२ वर्षीय सूर्य
कडा सुरक्षा व्यवस्था सहित नेकपा सचिवालय बैठक सुरू
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सुरू भएको छ । पूर्वमाओवादी पार्टीको कार्यालय रहेको पेरिसडाँडामा आजको सचिवालय बैठक सुरू भएको हो । नेकपा कार्यालय रहेको पेरिसडाँडाको सुरक्षा
धादिङ । ना ४ ख २८२२ को पेट्रोल ट्रयाङकर धादिङको गल्छी गाउपालिका ६ चिरौदीबाट त्रिशुली नदिमा खसेर आगलागी भएको छ । सवारीमा भएका चालक र सहचालक कहाँ छन् जानकारी नभएको
चिरञ्जीवी मास्के, दोलखा दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर ५ वनदेथलीका दाजु–भाइ रामकुमार र धनकुमार थामी अनिँदो भएको धेरै दिन भयोे । गत साउन २० गतेको पहिरोले घर जोखिममा परेपछि उनीहरु
सिन्धुपाल्चोक, (नेस) घुम्थाङ पहिरोमा घर क्षति भएका परिवारलाई नेकपा निकट राष्ट्रिय युवा संघले अस्थायी संरचना निर्माणका लागी जस्तापाता दिने भएको छ । शनिबार पीडित प्रभावितका लागि खाद्यान्न राहत बोकेर घुम्थाङ
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं समाजसेवी ताराबहादुर कुँवरको आयोजनामा विभिन्न चरणमा गरी ७९ जनाले रक्तदान गरेका छन् । शनिबार भएको कार्यक्रममा २७ जनाले रक्तदान गरेका छन् । यसअघि दुईपटकमा गरी ५२ जनाले
डा. कोइराला डिस्चार्ज
काठमाडौं, (नेस) नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ । कोरोना संक्रमित हुनुभएका कोइराला केही दिनअघि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उपचारका लागि ओम अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो ।
यातायात सञ्चालनसँगै न्यायिक कार्य सामान्यतर्फ
विकास भट्टराई, काठमाडौं सार्वजनिक यातायात तथा हवाई उडान नियमितरुपमा सञ्चालनमा आएसँगै नेपालको न्याय क्षेत्रको कार्य पनि अब सामान्यतिर फर्कन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतलगायत उच्च तथा जिल्ला अदालतहरुले यही असोज
नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं कोरोनाको त्रासकैबीच छैटाैं संविधान दिवस टुँडिखेलमा औपचारिक कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । सरकारले संविधान जारी भएको ऐतिहासिक दिनलाई राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । संविधान दिवसलाई
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै लामो समयसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा गरेपछि आलोचित बनेको सरकार अब उपत्यकामा लकडाउन नगर्ने मनस्थितिमा पुगेको छ । लकडाउनको विकल्पका रुपमा उपत्यकाको भीडभाड
भगवती तिमल्सिना,काठमाडौँ । संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले ७७ जना स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विभिन्न मानपदवी तथा अलंकारबाट विभूषित गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ठ योगदान गरेका व्यक्तिहरुलाई दिइने यो पदवीबाट
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं । बितेको २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ७११ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । काठमाडौं जिल्लामा ५७०, ललितपुरमा ५८ र भक्तपुरमा ८३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन् । आज
आज थप १२०४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि,मृतकको संख्या ४ सय नाघ्यो
न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं । आज (शनिबार) थप १२०४ जनामा कोरोाना संक्रमण पुष्टि भएको छ । आज देशभर गरिएका १०३३३ नमुना परीक्षणमा १२०४ संक्रमण पुष्टि भएको हो । यससंगै नेपालमा हालसम्म